Ampiasao ny fanalahidin'ny volavola hamelomana ny efijery | Androidsis
Rehefa manana ny finday vao azontsika isika dia mandeha tsara ny zava-drehetra ary tsy mila miahiahy na inona na inona isika. Fa raha efa niaraka tamin'io isika nandritra ny fotoana fohy ary nampiasaina betsaka isan'andro, zavatra heverina fa azo antoka fa mety manana ny lakileninao sasany tsy mandeha tsara izany. Miankina amin'ny kalitaon'ny telefaona ihany koa izany, fa avia, isika izay efa nampiasa Android nandritra ny fotoana kelikely dia tsy maintsy nitady fomba samihafa hahafahana mamelona, ​​ohatra, ny efijery telefaona satria somary tonta ny bokotra herinaratra.
Raha toa ianao ka eo amin'ny tranga izay ity bokotra herinaratra ity dia efa amin'ny andro farany, ny fampiharana izay entiko amin'ireto andalana ireto dia azo antoka fa ho tonga mora raisina ho anao hahafahana mampiasa ny lakilen'ny volume hampandehanana azy. Tsy izany no izy amin'ny fitaovana rehetra, fa vitsy ny mety manana an'io olana io na dia finday avo lenta aza ny findainy, satria mety hitranga ihany koa ny kilema ary mandritra ny volana vitsivitsy izay mety avelany hiaina dia tsara kokoa ny mampiasa ny iray amin'ireo lakileny hafa handefasana ny terminal.
1 Alefaso ny telefaoninao amin'ny alàlan'ny fanalahidy
2 Tsotra sy mahomby
Alefaso ny telefaoninao amin'ny alàlan'ny fanalahidy
Ny fampiharana ho an'ity tanjona ity dia antsoina hoe Volume Unlock ary hamela anao hivadika telefaona amin'ny alàlan'ny fanalahidin'ny volavola. Anisan'ireo fiasa ananany io dia manana widget hamonoana ny efijery sy ny mety hampiasana ny fanakatonana avy amin'ny bara fampandrenesana.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mampihetsika «Herin'ny volavola», avy eo ampidirina ny widget hamonoana ny efijery ary vonona. Manomboka izao dia azonao atao ny mamadika ny terminal amin'ny alàlan'ny fanalahidin'ny volavola ary hanana ny fahafaha mamono azy amin'ny alàlan'ny bara fampandrenesana na avy amin'ny widget ianao.
Tsotra sy mahomby
Volume Unlock dia fampiharana tsotra sy mahomby tsy misy afa-tsy ity. Manana ny safidinao amin'ny fampiharana ianao, velomy rehefa manomboka ny telefaona ary ampodino ny fanakatonana tsy ho fampandrenesana.
Anananao izany maimaim-poana avy amin'ny Play Store, ary izay dia nilaza fa ny fahatsorany dia ny hatsarany lehibe hanomezana ny mpampiasa hampiasa lakile hafa amin'ny telefaonin'izy ireo handrehitra ny efijery.
Mamoha ny Volume
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hamadihana ny efijery findainao amin'ny alàlan'ny fanalahidy
Imladris Moreindil dia hoy izy:
Ny xperia dia azo alefa amin'ny paompy indroa amin'ny efijery 🙂
Mamaly an'i Imladris Moreindil
Mampiavaka an'io ny LG namoaka tamin'ny fanombohana ny LG G2 antsoina hoe Knock On sy Knock Off izay taty aoriana dia namokatra maro ny mpamokatra ao amin'ny tobiny.
[Lahatsary] [APK] Sintomy ny Twitter 5.44; Toy izao no fiasan'ny hafatra an-tsary Twitter vaovao ho an'ny Android